मिडिया > जर्नल फोकस फोकस > पत्रिका फोकस यीशु 2018-03 > समयको साइन इन गर्नुहोस्
समय कसरी उडन्छ! पहिले तपाईंले वसन्तको फूलमा हेर्नुभयो, ग्रीष्मको अद्भुत तातो स्वाद लिनुभयो, तपाईंले फसलको पाकेको फल प्राप्त गर्नु अघि। अब भविष्यको लागि तपाईंको आँखा खुला संग हेर्नुहोस्। तपाईं कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दै, तपाईंको कभर चित्रमा हेराई होभरफ्रस्टले सजाइएको झोलासम्म, छायाँको जंगल वा पृष्ठभूमिमा पहाडहरूको दायरासम्म विस्तार हुनेछ। सायद तपाईको अभेद्य क्लाउड कभरको पनि चिन्ता छ, जस अन्तर्गत मानिसहरूले तपाईंलाई उज्यालो प्रकाशको केही अनुभव गर्दैनन्।
म समय को संकेत देखेर खुसी छु। जब म मेरो घडीमा हेर्छु, यसले मलाई यो समय बताउँछ र उही समयमा मलाई के भयो भनेर देखाउँदछ। यसको लागि मलाई आध्यात्मिक रूपमा खुला आँखा आवश्यक छ, केवल यस प्रकारले म येशू र उसले मलाई के भन्छ देख्न सक्छु।
यो सोचाइले मलाई कोरिन्थीहरूलाई लेखेको पत्रको ठाउँमा पुर्‍यायो, जहाँ यसो भनिएको छ: «तर मानिसहरूका विचारहरू अँध्यारो भएको छ र तिनीहरूको विचारलाई आज सम्म घुम्काइएको छ। जब पुरानो करारको कानून पढिन्छ, तिनीहरू सत्यलाई चिन्न सक्दैनन्। यो घुम्टो मात्र सक्छ ख्रीष्टमा विश्वास गरेर aufgehoben werden» (2. Korinther 3,14 Neues Leben Bibel).
यो घुम्टो, एक आध्यात्मिक बादल कवरले येशूलाई खोज्न रोक्दछ। उहाँ एक्लै यसलाई लिन सक्नुहुन्छ किनकि उहाँ संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। कुनै व्यवस्था र कुनै पनि आदेशको पालनाले तपाईंलाई प्यारो पाठक, प्रकाशमा ल्याउँदैन, तर केवल येशू। के तपाईं उनको प्रेम प्रस्ताव स्वीकार गर्न चाहानुहुन्छ? विश्वास गर्नुहोस् कि यसले तपाईंलाई अनन्तसम्म, समयको स्पष्ट दृश्य दिन्छ।
येशूको ज्योति तपाईंमा चम्कन्छ यदि तपाईं येशू र उहाँको वचनमा विश्वास गर्नुहुन्छ। घुम्टो हटाइयो। तपाईं आफ्नो कामको साथ परमेश्वरको राज्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घोषणामा भाग लिनुहुन्छ कि हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको प्रेम खन्याइएको छ।
भगवानको अवतारित छोरा मार्फत प्रेमको प्रभावले तपाईंको जीवनमा कसरी प्रभाव पार्छ, तपाईंलाई आनन्दित तुल्याउँछ र भगवान्‌को आदर गर्छ भनेर तपाईं अनुभव गर्न सुसज्जित हुनुहुन्छ।